घनघोर कलियुग? भान्जा भान्जीलाई गरिदिए सन्सारबाटै बिदा, दाजुले बहिनीलाई समेत छोडेनन् - Onlines Time
July 31, 2021 onlinestimeLeaveaComment on घनघोर कलियुग? भान्जा भान्जीलाई गरिदिए सन्सारबाटै बिदा, दाजुले बहिनीलाई समेत छोडेनन्
कलियुग लागे के होला भन्ने प्रश्न बारम्बार गरिएको पाइन्छ ।
समाजमा भएका एकदमै पाशविक कामहरु देखेर मानिसहरु कलियुग आएको समेत भन्ने गर्छन् । यस्तै घटना भारतमा भएको छ । आग्राको कोतवाली क्षेत्रको कुचा साधुराम इलाकामा रेखा र उनका तीन बच्चाहरूको अचानक शव भेटियो ।
एकै परिवारका चार जनाको शव भेटिएपछि प्रहरी अनुसन्धानमा जुट्यो । जब सत्य बाहिर आयो, कसैले पत्याउनै नसक्ने सत्य बाहिरियो । यो घटनामा रेखाका दाई सन्तोष मुख्य योजनाकार भएको पाइएको छ, जसलाई कसैले सपनासमेत सोचेको थिएन ।
मंगलबार, जब पुलिसले उक्त घटनाको खुलासा गर्‍यो, इलाकाका मानिसहरू चकित भए । मान्छेहरूले कलियुग लागेको भन्दै सन्तोषलाई सराप दिए । उनले रेखा र उनका तीन बच्चाहरुलाई सन्सारबाटै विदा गरिदिए । घटना पछि कुचा साधुरामका मानिसहरू पनि धेरै चकित रिसाएका छन् ।
घटना पछि मानिसहरु यो कुरा बुझ्न असमर्थ थिए कि रेखा र उनको परिवारको कोहीसँग नराम्रो ब्यवहार थिएन । तब कसरी भयो यस्तो घटना भनेर । तर, जब यो खुलासा भयो, परिवारका सदस्यहरूको खुट्टामुनिको जमिन नै भा सि यो ।
रेखाले रक्षाबंधनमा राखी बाँ ध्ने हातले कसरी यस्तो घटना गर्न सके भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। घटनाको खुलासा भएपछि रेखाका बुबा विनोदले भने कि उनी अब सन्तोष र उनका साथीहरूलाई फाँ सी को सजाय पाएको हेर्न चाहन्छन् । उनले सन्तोषको परिवारसँग नाता समेत तो डे का छन् ।
रेखाका बुबा विनोद राठौर छत्तीसगढ़मा बस्दै थिए । रेखा उसको काकाको घरमा हुर्किइन् । उनको हजुरआमाले पनि उनको बिहे गराइदिइन् । दुई वर्ष अघि उनको पति सुनीलसँग उनी अलग भइन् । उनी तीन बच्चाहरु वन्श उर्फ ​​टुक्तुक, पारस र माहीसँग बस्दै थिइन्। जुलाई २२ को बिहान, घरबाट चारजनाको शव निस्कियो ।
विनोदले भने कि सन्तोष रेखाको फुपुको छोरो हो । उ तीन दाजु मध्ये जेठो हो । रेखा र सन्तोष को उमेर लगभग बराबर छ। घरहरू पनि नजिक छन् । यसै कारण रेखा र सन्तोष बाल्यावस्थामा सँगै खेल्थे । रेखाले सन्तोषलाई राखी बाँ ध्न थालि । आफ्नो श्रीमानबाट छुट्टिए पछि उनले सन्तोषलाई उनको घरमा जान सगाउन लगाउथिन् । उनले उसलाई विश्वास गरीन् । तर जब पुलिसले यसको खुलासा गर्‍यो, सबै छक्क परे ।
विनोदले भने कि सन्तोष बारे सोच्ने छैनन् । अब उस र उनको परिवार संग हाम्रो कुनै स म्ब न्ध थिएन । पुलिसले खुलासा गरेको कुरा बिल्कुल सही छ । आरोपीलाई बढी सजाय दिइनु पर्छ । परिवारका अन्य सदस्यहरूले पनि यही कुरा भने । घटनाको पहिलो दिनदेखि नै, पुलिसले यो घटना एक परिचितले गरेको थियो भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए ।
रेखाको घर बुधवार दिउँसो खुल्ला थियो । तर कुनै पनि छिमेकीहरू घर गएनन् । बिहीबार घर भित्र गए पछि सबैलाई थाहा भयो । जब इलाकाका व्यक्तिले आफन्तको घरमा यस्तो घटना भएको थाहा पाए तब उनीहरू पनि छक्क परे । सबैले भने कि जसले आमा र बच्चाहरूलाईयस्तो गर्नेलाई कडा सजाय दिइनु पर्छ।
कोरियन लाहुरेले आफ्नी हिरोइन जस्ती श्रीमतीको माया बुझेनन; अन्ततः श्री’मतीले यस्तो गर्न बाध्य भइन(हेर्नुस भिडियो)
December 8, 2020 December 8, 2020 onlinestime
१२ वर्षकै उमेरमा यस्तो , घर नहुँदा रितु बोहोरा मन्दिरमै बसिन् कि’रिया (सहयोग स्वरुप सेयर गराै)